Ampitomboy ny haben'ny lahatsoratra amin'ny iPad ampiasainao amin'ny alàlan'ny Accessibility | Vaovao IPhone
Ho an'ny maro ny Ny haben'ny lahatsoratra iPad dia tsy ampy amin'ny fampiharana sasany, indrindra rehefa miresaka momba ny iPad Mini isika. Apple dia mitandrina fatratra ny fahazoana miditra ny vokatra vokariny, ary ireo olona jamba na misy olana mety hanasarotra ny fampiasana ny fitaovany dia matetika mahita vahaolana ao anatin'ny menio Settings. Ny lahatsoratry ny mailaka, hafatra na koa ny boky ifandraisana dia mety ho sarotra vakiana ho an'ny olona manana olana amin'ny fahitana, ary ho hitantsika ny fomba hahitantsika vahaolana mora amin'izany ao anatin'ny menio fidirana amin'ny iPad. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mankany amin'ny Settings> General> Accessibility, ary amin'ireo safidy rehetra dia safidio ny "Texte be". Misafidy ny haben'ny lahatsoratra ahazoana mamaky azy izahay ary mivoaka ny menio Settings.
Vita izany, dia ho hitantsika ny lahatsoratra avy amin'ny fampiharana toy ny Mail, Messages, Kalandrie, Contacts ary Notes dia ho avo kokoa, ary afaka mamaky azy io mora foana isika. Ny rindran-damina sasany dia tsy manova ny haben'ny lahatsoratra, toa ny Safari, fa tadidio fa amin'ny fanaovana ny fihetsika mahazatra ny fanasarahana ny rantsan-tànana roa dia hanao zoom isika ary hahafahantsika mampitombo ny haben'ny lahatsoratra. Misy ihany koa ny rindranasa hafa toy ny ibooks izay ahafahantsika mampitombo ny haben'ny endritsoratra avy ao anatin'ny fampiharana. Ny haben'ny lahatsoratra apetraky ny antoko fahatelo dia tsy voakasik'ity safidy ity, fa maro amin'izy ireo no manana safidy ao amin'ny menio fananganana azy ireo hahafahany mampitombo ny haben'ny endritsoratra.
Manome antsika ny menio Accessibility ao anatin'ny iOS Settings safidy maro hanamorana ny fampiasana ny iPad raha manana olana ianao. Apetraho ao anaty mono ny audio, ny assistiveTouch hialana amin'ny fampiasana ireo bokotra ara-batana, ny famakiana lahatsoratra mandeha ho azy ... na ny zoom amin'ny alàlan'ny fanindriana intelo ny bokotra fanombohana. Ilaina ny mijery ireo safidy atolotra antsika, azo antoka fa misy ny sasany izay mahasoa anao.
Fampahalalana bebe kokoa - Izahay dia mamakafaka ny fahazoana miditra ny vokatra Apple ao amin'ny podcast 2 × 11 an'ny Actualidad iPhone
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ampitomboy ny haben'ny lahatsoratra amin'ny iPad-nao
Ahoana ny fomba hamahana ny olan'ny famirapiratanana mandeha ho azy ao amin'ny iOS 6
Nohavaozina indray ny WhatsApp hitondra vaovao